20 November Saturday 2021 Top3Prize Number Predictions – Elite Membership | Malaysia Magnum, Singapore Pools 4D ToTo Sweep
4D ခန့်မှန်းချက် - Singapore Pools၊ Magnum Malaysia 4D
20 November Saturday 2021 Top3Prize Number Predictions – Elite Membership
Posted on : 18-11-2021 | By : 4D မာစတာ | တွင် : 4D ခန့်မှန်းချက် - Singapore Pools၊ Magnum Malaysia 4D
4d ကို ဘယ်တော့မှ မရိုက်တာ တော်တော်ကြာပါပြီ။
5 တွင်5အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
elite အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်သာပါဝင်ပါ၊ နှစ်သိမ့်မှုအပေါ်တိုက်ရိုက် 2367 လုပ်ကြံပါ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဆရာကြီး😊။
ကျွန်ုပ်သည် 2021 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ7ရက်နေ့တွင် စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် သင်၏ TOTO ခန့်မှန်းချက်များကို 8 ဇူလိုင် 2021 အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Toto Prediction ခန့်မှန်းချက်မှ တစ်အုပ်ကို အမှတ်အသားပြုပါသည်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ထိပ်တန်းဆုကြီးတစ်ခုရတိုင်း TOTO ကို ဘယ်တော့မှ မရိုက်ပါဘူး။ ပထမအကြိမ်သပိတ်။ ကျွန်တော်လည်း 4d Elite အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးပါ။ လာမည့် 4d ခန့်မှန်းချက်များကို စမ်းကြည့်ရန် ယခု မစောင့်နိုင်တော့ပါ။ 4d master အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်သည် 4D Elite အဖွဲ့ဝင်ခြင်းသို့ စာရင်းသွင်းထားသည်။ Elite Prediction အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Hot နံပါတ်ဖြင့် ခန့်မှန်းထားသော 1236 ကို ဝယ်ယူပြီး အစောပိုင်းဆုအား ရရှိခဲ့ပါသည်။ မကြာမီ ထိပ်တန်းဆုကြီး3ခုကို ရရှိနိုင်ရန် မျှော်လင့်လျက်4D Masters ၏ တိကျသောဟောကိန်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည် ဆရာကြီး။
သက်သေခံချက် မလုပ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဒါက အလုပ်ဖြစ်တယ်၊ အဲဒါကို ယုံကြည်တယ်။ ကော်ဖီတစ်ခွက်ရဲ့ စျေးနှုန်းနဲ့သာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတစ်ခုပါပဲ။ နှစ်သိမ့်မှု ( 9548 ) $10 ibet ကို နှိပ်လိုက်သည် ။ ဒါက အစပဲရှိသေးတယ်။ ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ
ခန့်မှန်းပြီးနောက် လုပ်ကြံရန် အခွင့်အလမ်း ပိုများသည်။
ကျွန်ုပ်သည် 4dinsg မှ ခန့်မှန်းပြီးနောက် 8721 တိုက်ရိုက်နံပါတ်ကို လုပ်ကြံခဲ့သည်၊
ကိန်းဂဏာန်းများကို မှန်းဆခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် အလားအလာ ပိုများသည်။
နောက်ထပ် huat huat အနိုင်ရဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် !!
ပထမဆု ကို ရိုက်ပါ။
နောက်ဆုံးဆွဲလိုက်တာက 9316 စနစ်နံပါတ်ကို ရိုက်လိုက်တာ။ (ပထမဆု)။ ပထမဆုရခဲ့တာ ဒါပထမဆုံးအကြိမ်ပဲ။ တစ်ဖန် ပထမဆုရရန် ကူညီပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အနာဂတ် 4D ရလဒ်များတွင် ပိုမိုအနိုင်ရရှိရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
1st Time Strike ထိပ်တန်း3ဆု
ဧပြီလ ၁၄ ရက်နေ့က တတိယဆု မဲနှိုက်ခဲ့တယ်။ မနက်ဖြန်အတွက် ပထမဆုရရှိဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ 4D ရလဒ်များ Huat!
4d ဆရာကြီးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
4 တွင်5အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
မနေ့က စပြီး 2856 ဆုတွေ ပေးလိုက်ပြီနော်... ဒါ ဒီကနေ တတိယ အကြိမ် ထပ်ရိုက်လိုက်တာပါ... မင်းရဲ့ 4d ရလဒ် ခန့်မှန်းချက်တွေအတွက် ကျေးဇူးပါ.. ဒီအဖွဲ့ဝင်မှုမှာ ပါဝင်ရင်းနဲ့ အရမ်းတန်ပါတယ်... ငါ့ကို ဘယ်တော့မှ စိတ်မပျက်စေနဲ့...
4d ဂဏန်းများကို ခန့်မှန်း၍မရတော့ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်မှန်းဆချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အနိုင်ရနှုန်းမှာ သေချာပေါက် မြင့်မားပါသည်။ ဒီဆိုက်ကို လာလည်ပြီး ဒီသက်သေခံချက်တွေကို ဖတ်တဲ့သူတိုင်းကို မကြည့်တော့ဘူး။ ဤနေရာသည် အမှန်တကယ် ခန့်မှန်းထားသော ကိန်းဂဏန်းများ၏ အောင်ပွဲနှုန်းများ မြင့်မားနေသည့် နေရာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Gold Member တစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်ပြီး မနေ့က အောက်တိုဘာလ 27 ရက်နေ့အတွက် သင်၏ ထိပ်တန်းဆု3ခု တိုက်ရိုက်ကိန်းဂဏန်း ခန့်မှန်းချက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် 2037 Direct & I-Bet တွင် အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြသရန်အတွက် SG Pools မှ ကျွန်ုပ်၏ဆုငွေများကို စုဆောင်းပြီးနောက် ယနေ့နံနက်တွင် သင့်အကောင့် (Ang Pao $20) သို့ လွှဲပေးထားပါသည်။ နောက်ထပ်များစွာသောအနိုင်ရဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ လာပါ!! 4D Master Prediction အဖွဲ့ဝင်ခြင်းကို ယနေ့တွင် ပါဝင်ရန် သင့်စိတ်မ၀င်စားသူများကို ကျွန်ုပ်တိုက်တွန်းပါသည်။ SG Pools မှ $$$$ ကို စတင်စုဆောင်းပါ။ Huat Ah!!!
သင်၏တိုက်ရိုက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုစာရင်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် 4D ရလဒ်များတွင် Direct 5378 =) ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပြီး TOP3ဆုများရရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး အတူတကွ ပေါင်းစည်းရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
အံ့သြဖွယ် 4D ရလဒ်များ
3 တွင်5အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
ဇွန်လ 17 ရက်နေ့တွင် သင့်ခန့်မှန်းချက်မှ 6290 ကိုရွေးချယ်၍ ကံကောင်းစေပါသည်... $250 ကို ကံစမ်းပါ။ ပြီးတော့ မင်းရဲ့ဆိုက်ကနေ ငါမြင်နေရတာကို 4D ရလဒ်တွေကနေ မင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်တာက တကယ့်ကို အံ့သြစရာကောင်းတယ်။ ဘယ်လို လုပ်လိုက်တာလဲ မသိပေမယ့် အံ့သြစရာပါပဲ...
4D တွင် ကြီးကြီးမားမားဆုများ ဆွတ်ခူးရန် အလားအလာ
ကျွန်ုပ်သည် လူသိများသော 4d ဟောကိန်းဆိုက်2ခုကို စမ်းကြည့်ဖူးသည်... အလွန်တိကျမှုမရှိသော်လည်း ... ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် ရွှေအသင်းဝင်ရန်အတွက် သင့်ထံဝင်ရောက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ မင်းထွက်လာတဲ့ နည်းဗျူဟာတွေကို ငါကြိုက်တယ်။ မင်းရဲ့ site ဟာ 4d ရလဒ်တွေနဲ့ အနိုင်ရဖို့ အလားအလာ ပိုပြည့်စုံတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်... ခေါင်းကွဲနေတဲ့ တွေးခေါ်မှုတွေနဲ့ ခန့်မှန်းမှုတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပါဝင်ပြီးနောက်၊ အနိုင်ရရန်အခွင့်အရေးများ တိုးလာပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
မှတ်တမ်းများ လ ရွေးပါ ဇန်နဝါရီ 2022 ဒီဇင်ဘာ 2021 နိုဝင်ဘာ 2021 အောက်တိုဘာ 2021 စက်တင်ဘာ 2021 ဩဂုတ် 2021 ဇူလိုင် 2021 ဇွန် 2021 မေ 2021 ဧပြီ 2021 မတ် 2021 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2021 ဇန်နဝါရီ 2021 ဒီဇင်ဘာ 2020 နိုဝင်ဘာ 2020 အောက်တိုဘာ 2020 စက်တင်ဘာ 2020 ဩဂုတ် 2020 ဇူလိုင် 2020 ဇွန် 2020 မေ 2020 ဧပြီ 2020 မတ် 2020 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2020 ဇန်နဝါရီ 2020 ဒီဇင်ဘာ 2019 နိုဝင်ဘာ 2019 အောက်တိုဘာ 2019 စက်တင်ဘာ 2019 ဩဂုတ် 2019 ဇူလိုင် 2019 ဇွန် 2019 မေ 2019 ဧပြီ 2019 မတ် 2019 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2019 ဇန်နဝါရီ 2019 ဒီဇင်ဘာ 2018 နိုဝင်ဘာ 2018 အောက်တိုဘာ 2018 စက်တင်ဘာ 2018 ဩဂုတ် 2018 ဇူလိုင် 2018 ဇွန် 2018 မေ 2018 ဧပြီ 2018 မတ် 2018 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2018 ဇန်နဝါရီ 2018 ဒီဇင်ဘာ 2017 နိုဝင်ဘာ 2017 အောက်တိုဘာ 2017 စက်တင်ဘာ 2017 ဩဂုတ် 2017 ဇူလိုင် 2017 ဇွန် 2017 မေ 2017 ဧပြီ 2017 မတ် 2017 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2017 ဇန်နဝါရီ 2017 ဒီဇင်ဘာ 2016 နိုဝင်ဘာ 2016 အောက်တိုဘာ 2016 စက်တင်ဘာ 2016 ဩဂုတ် 2016 ဇူလိုင် 2016 ဇွန် 2016 မေ 2016 ဧပြီ 2016 မတ် 2016 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2016 ဇန်နဝါရီ 2016 ဒီဇင်ဘာ 2015 နိုဝင်ဘာ 2015 အောက်တိုဘာ 2015 စက်တင်ဘာ 2015 ဩဂုတ် 2015 ဇူလိုင် 2015 ဇွန် 2015 မေ 2015 ဧပြီ 2015 မတ် 2015 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2015 ဇန်နဝါရီ 2015 ဒီဇင်ဘာ 2014 နိုဝင်ဘာ 2014 အောက်တိုဘာ 2014 စက်တင်ဘာ 2014 ဩဂုတ် 2014 ဇူလိုင် 2014 ဇွန် 2014 မေ 2014 ဧပြီ 2014 မတ် 2014 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2014 ဇန်နဝါရီ 2014 ဒီဇင်ဘာ 2013 နိုဝင်ဘာ 2013 အောက်တိုဘာ 2013 စက်တင်ဘာ 2013 ဩဂုတ် 2013 ဇူလိုင် 2013 ဇွန် 2013 မေ 2013 ဧပြီ 2013 မတ် 2013 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2013 ဇန်နဝါရီ 2013 ဒီဇင်ဘာ 2012 နိုဝင်ဘာ 2012 အောက်တိုဘာ 2012 စက်တင်ဘာ 2012 ဩဂုတ် 2012 ဇူလိုင် 2012 ဇွန် 2012 မေ 2012 ဧပြီ 2012 မတ် 2012 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2012 ဇန်နဝါရီ 2012